ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၆-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၆-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- လက်ပံတောင်းအစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်နေ click
- NLD မြို့နယ် ခေါင်းဆောင်များအား ဆန္ဒပြမှု ခွင့်ပြုချက်မရှိ၍ အရေးယူခံရ click
- ကျိုင်းတုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရက်ရွှေ့၊ ဝ နယ် စစ်ရေး တင်းမာဆဲ click
- လက်နက်ကြီးကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ click
- ကလေးစစ်သား တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှု စိတ်ဓာတ်ကျစရာ ဖြစ်ဆဲပင် (ဆောင်းပါး) click
- ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကို ပြန်လည်ကြွလာခွင့်ပြုပြီ click
- ရွှေတိဂုံမှာ သတင်းယူတဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကို ဂေါပကတဦး ဆောင့်တွန်းခဲ့မှု တရားစွဲမည် (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှ၏ နောက်ထပ် ကျားတကောင်ဖြစ်သည် - ၂ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ - အပိုင်း (၈) click
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစီအမံတွေ ယှဉ်ပြိုင်မှု နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထား (ရုပ်သံ) click
- ရေမြေတောတောင် ဂေဟစနစ်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရေး အမွေပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံ ၁၁ ခုက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- ဖေဖေ့အကြောင်း (၁) click
- ရယ်ဒီ .. ၀မ်း .. တူး .. သရီး (ကာတွန်း) click
- မက္ကဆီကို မီးတောင်ကြောင့် လေယာဉ်တွေ ရပ်ဆိုင်း click
- Rainbow သတင်း (၅-၇-၂၀၁၃) click
စည်ပင်သာယာကော်မတီ က ဟန်ပြ ဖွဲ့ တာလား?
တိုင်း/ပြည်နယ်တွေ မှာရော ကော်မတီ မဖွဲ့ဘူးလား?
ဗမာပြည်မှာ ကော်မတီပေါင်းများစွာဖွဲ့ပြီး For Show
တွေများနေတယ် လက်တွေ့ ကျဖို့လိုတယ်
လုပ်စားနေတဲ့ စည်ပင်တွေက သနားတယ်။